Automatic N95 Nkpuchi Ime Machine
Na-agbanwe ntị gbalaga nkpuchi igwe
Akwa ọsọ 1 + 1 ewepụghị nkpuchi igwe
Automatic Cup nkpuchi Ime Machine
3D ịkpakọba nkpuchi nkpuchi
Elastic nkpuchi ntị gbalaga
Agbaze fụọ na-abụghị kpara akwa
Nkpuchi Nkwado Nkpuchi
Nkpuchi akpa mbukota igwe
Nkpuchi igbe igbe
Akwụkwọ Bag-Ime Machine
Wet wipes igwe
ICT | Plastic Akpụkpọ ụkwụ Cover Ime Machine
ICT | Plastic akpụkpọ ụkwụ Cover Ime Machine Dispense na-abụghị kpara ihe onwunwe akpụkpọ ụkwụ mkpuchi igwe, ezi mma, ala price, elu mmepụta uru, nwere ike kpamkpam dochie ntuziaka akpụkpọ ụkwụ mkpuchi, ịzọpụta ọrụ, belata-akwụ ụgwọ, nwere ike ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ. Onye ọ bụla chọrọ inye nkọwa ihe ...
RZFD-190 Roll inye nri ala ala akwụkwọ akpa igwe
Rolling ndepụta square ala akwụkwọ akpa Ndinam igwe, ọ na-eji akwụkwọ mpịakọta na oghere ma ọ bụ e biri ebi dị ka akụrụngwa. Igwe ahụ dịkwuo mfe, ịrụ ọrụ nke ọma karị, kwụsie ike karị, nke nwere ike ịmepụta ọtụtụ akpa akwụkwọ dị iche iche, akpa nri ezumike, akpa nri, akpa mkpụrụ osisi a mịrị amị na ihe ndị ọzọ ...
Uru na ọghọm nke igwe Wipes
site ha na 21-05-07
Ruo ugbu a, ekwenyere m na ọtụtụ mmadụ amaghị ihe okwu ahụ bụ "wet wipe machine"? Wet ehicha igwe a mụrụ na China fọrọ nke nta ka afọ 20. Ọmụmụ nke igwe na-ehichapụ igwe emeela ka anyị nwee ezigbo ndụ, ma n'otu oge ahụ, ọ meela ka ndụ anyị ka mma. Eve ...
Igwe nkpuchi nkpuchi akpaka zuru oke maka imepụta ihe nkpuchi N95
Ebe ọ bụ na ụdị igwe nkpuchi a na-akpaghị aka, otu onye nwere ike ịgba igwe atọ na akụrụngwa, ihe dị ka iko 8-12 nwere ike mepụta kwa nkeji. Njirimara njirimara bụ ịrụ ọrụ kwụsiri ike, mkpọtụ dị ala, na ọrụ na-aga n'ihu; tumadi Ọ bụ usoro PLC na-achịkwa ya; ọdịdị st ...
Nlekọta na mmezi nke ihe nkpuchi ihu igwe maka N95
site ha na 21-03-22
1. The nkpuchi ihu banding igwe na-eji 220V mains ike ozugbo, otú nkpuchi ihu banding ahụ kwesịrị n'ụzọ kwesịrị ekwesị tupu ike na, na grounding mgbochi ga-erughị 4 ohms. 2. Mgbe mgbanwe ngbanye ọkụ ọkụ dị elu karịa 10%, a ga-arụnye ihe nkwụnye ọkụ AC o ...
2021 ọkụ na-ere
Mee ka igwe ihe nkpuchi nke China “pụọ” iji nyere aka na mba ofesi buso oria a agha
site ha na 20-11-03
Oge oyi oyi na-atụ, ọrịa a maliteghachiri n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa, ọnụ ọgụgụ ndị ekwenyela na-arịwanye elu. Ọrịa zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu na-agbasa, na ọtụtụ mba na mpaghara amalitela ọzọ na-ewusi njikwa ọrịa. Ọrịa ahụ akwụsịbeghị, nchedo shou ...
Kedu otu esi ahọrọ igwe nkpuchi nke nwere ike izute mkpa mmepụta nke gị?
site ha na 20-07-16
Nke mbu, gwa anyi udi nkpuchi ịchọrọ imepụta; Nke abuo, na ahịa nkpuchi igwe nwere ndị na-esonụ iche iche: mpịachi N95 nkpuchi Ndinam igwe, Ewepụghị ọgwụ nkpuchi Ndinam igwe, Cup N95 nkpuchi Ndinam igwe, wdg. Nke atọ, họrọ igwe nkpuchi, ọkara akpaka ma ọ bụ akpaka zuru ezu, dị ka gị ...
Nke 1305, Iwuli 2, Mba .371 Mingxing Road, Xiaoshan Economic na Teknụzụ Development Mpaghara, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Industrial Robot System Ngwọta